Third Heaven: 2009
အဲဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် . . .
ဒီနေရာတွင် ဇာတ်လမ်းစသည်။ . . .
ကောင်းကင်တွင် ကြယ်တစ်လုံး ကြွေသွားသည်။ သူမော့ကြည့်နေမိ၏။ ဆုတောင်းဖို့ကို သတိမရ။ အဖော်တစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားသော လမင်းကြီးကို သနားနေမိသည်။ ကိုယ်ချင်းစာမိပါသည်။ ထိုခံစားချက်ကို ကိုယ်သိသည်၊ ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိသည်လေ။ ကိုယ့်ကောင်းကင်တွင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရှိနေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အင်း . . . ။ ကြာခဲ့ပါပြီ။ သူ့စိတ်များက လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်အချိန်များဆီသို့ ရောက်ရှိသွား၏။ မှတ်ဥာဏ်ထဲတွင် ရုပ်ရှင်ကားချပ်များ ပေါ်လာခဲ့သည်။ တဖျပ်ဖျပ် လှုပ်ရှားနေခဲ့သော ပုံရိပ်များ၊ မှတ်ဥာဏ်များ၊ ခံစားချက်များ . . .
ကျွန်တော်နှင့်ကောင်မလေးသည် ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် အလွန်ရင်းနှီးသော သူနှစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ချစ်သူများ မဟုတ်ကြပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြပါသည်။ ထိုအချစ်အမျိုးအစားကို ကျွန်တော်မသိပါ။ ဤသည်မှာ ထိုစဉ်က ကျွန်တော့်အသက်အရွယ်သည် “ကလေးသူငယ်” ဘဝမှ ကျွတ်လွတ်ပြီးခါစ ဖြစ်သောကြောင့်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ ယခုအချိန် ထိုခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာလျှင်ဖြင့် ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
ကောင်မလေး၏ မိဘများ တစ်နယ်တစ်ကျေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည့်နေ့တွင် သူမက ကျွန်တော့်ကို အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ် လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကို “ဒီဟာနင့်အတွက်။ ဒီဟာ နင်ပဲ” ဟုပြောပါသည်။ အရုပ်ကလေးသည် ကျွန်တော်နှင့် နည်းနည်းမှ မတူပါ။ သို့သော် ကောင်မလေးက ထိုအရုပ်သည် ကျွန်တော်ဟု ပြောသဖြင့် ထိုအရုပ်ကလေးသည် ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပါသည်။
ဒီနေ့တနင်္လာနေ့။ ကျောင်းဖွင့်ရက်ရောက်လာပြန်ပြီ။ ရေချိုး၊ အင်္ကျီလဲပြီးတော့အောင်ထပ်ကိုဆင်း လာခဲ့လိုက်တော့အမေက
စားပွဲပေါ်မှာကြည့်လိုက်တော့ Hot Dog တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲဒါပဲစားပြီး လွယ်အိတ်ကိုသွားယူနေလိုက်တာပေါ့။
`သား ဒီနေ့ဘယ်ကားနဲ့သွားမှာလဲ Marcedes လား Land Cruser လား Prado လား´
`အင်းပါ ကျွန်တော် Super Roof ပဲစီးသွားမယ်´
လှည်းသမား (Donkey Cart)
waiter ရောက်လာတော့ သောက်လက်စ ရေနွေးကြမ်းကို မှုတ်ရင်းနဲ့ မေးလိုက်သည်။
"ဒီကနေ နောက်တစ်မြို့ကို ဘယ်လိုသွားလဲကွ"
"ဆရာ...။ နောက်တစ်မြို့ကို သွားဖို့ဆိုရင် ရထားစီးသွားမှရမယ်။ ဘူတာရုံက နည်းနည်းဝေးတော့ မြည်းလှည်းငှားပြီး သွားရတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်တစ်စီး သွားငှားပေးရမလားခင်ဗျာ"
Category - short story, ဘာသာပြန်
-access denied မပေါ်တဲ့ proxy တစ်ခု
-ဒါဗင်ချီနဲ့ ပီကာဆိုရဲ့ ပန်းချီကားတွေ
-ပြီးတော့ ဖြည့်ဆည်းချင်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု
အင်း.... ဒီလောက်... ဒီလောက်ပါပဲ...။
အသိပညာ နုန့်နဲပုံရသော လူတစ်ယောက်က ရည်ရွယ်ရင်းအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ကျောက်လမ်းနံဘေးရှိဓာတ်မီးတိုင်ကိုမှီရင်း မိုးကောင်းကင်ကြီးအား ကြည့်နေမိသည့် ကျွန်တော့်ကို “ဘာလုပ်နေတုံး… ကိုယ့်လူ” ဟု ဆိုပါသည်။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ကျွန်တော်သည် သူ၏အသိခံအရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်လည်း မည်မျှကြာအောင် ဓာတ်မီးတိုင်မှီရင်း မိုးကောင်းကင်ကို ကြည့်နေခဲ့မိသည်မသိ။
ကျွန်တော်သိသည်မှာ မိုးကောင်းကင်ကြီး၏ မည်းမှောင်နေခြင်း၊ ထိုမိုးကောင်းကင်ကြီး၌ ကြယ်များနှင့် လကို မတွေ့ရခြင်း၊ ညသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ငြိမ်သက်လျက်ရှိခြင်း၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ရှိနေသော မြစ်၏ မျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကိုပါ ခလုတ်တိုက်သွားခဲ့သော မြစ်၏အခြားတစ်ဖက်ကမ်းမှ လေတို့၏ သစ်လွင်နေခြင်းနှင့် မှတ်မှတ်ရရမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်တော်သည် လေတချို့တို့ကို ရှူသွင်းပြီးတိုင်း ပြန်လည်၍ ရှူထုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် လေများစွာတို့ကို ဖြုန်းတီးနေခဲ့ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဘိုလီမီယံ ဆန်လိုက်တာဟယ်… ဟု သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်က သူ့ကို ကောက်ချက်ချသောအခါ ကျွန်တော်က အံ့သြသင့်ရပါမည်လား။ သူ့ကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမက ဝေဖန်လိုက်သလိုဖြင့် သူက မဟုတ်ပေဘူးလား။ မဟုတ်ဘူး… မဟုတ်ဘူး… မဟုတ်ဘူး… စသည်ဖြင့် မဟုတ်ဘူးပေါင်းများစွာကို သုံးနှုန်းကာ “ခါလီ” ၏ နောက်လိုက်များဖြေသလို ကျွန်တော်က သူ့ကိုယ်စားဖြေရပါမည်လား။ တစ်ခုခုတော့ ကျွန်တော်က ပြန်ပြောလိုက်ဖို့ကောင်းကြောင်း ကျွန်တော့်ဘာသာ သိလိုက်မိသော်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ ကျွန်တော်က ပြန်၍မပြောပြမိခဲ့ပါ။ ပြောပြချင်သောစကားလုံးပေါင်းများစွာကို သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ပြီးသည့်အခါတွင်မူ ရည်ရွယ်ရင်း အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမျှ မရှိဘဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို လေချွန်လိုက်မိပါသည်။
ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်နေလေ့ရှိသည့်ဟုဆိုသော ကမ္ဘာကြီးသည် အရင့်အရင်ကလိုပင် မဟုတ်ပေဘူးလား။
“ငါသေသွားတဲ့အခါ... ငါ့ကို အသုဘ လုပ်ပေးကြပါ...။”
ငါသေသွားတဲ့အခါ... ငါ့အလောင်းကို မြေမြှုပ်ပေးပါ...။ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားချင်လို့ပါ...။ ဒါမှမဟုတ် ငါ့အလောင်းကို တိရစ္ဆာန်အစာကျွေးလိုက်ပါ...။ ငါစားခဲ့တဲ့ အသားတွေအတွက် အကြွေးပြန်ဆပ်ချင်လို့ပါ...။ ကျေးဇူးပြု၍... ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကို မီးမရှို့ကြပါနဲ့...။ အပူကို မုန်းလွန်းလို့ပါ...။ လူတစ်ယောက် မီးလောင်တဲ့အခါ လေထုညစ်ညမ်းတာကိုသိပါ...။ အရမ်းညှော်တာကိုသိပါ..။ ဓာတ်ဆီကုန်တာကိုသိပါ...။ ဒါကြောင့် ငါ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ...။
အမှောင်ထဲရောက်နေသူအဖို့ မျှော်လင့်ချက်သည် အလင်းရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကို တစ်ခါက အလဲထိုးဖူးသော ပန်းတစ်ပွင့်အကြောင်းကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်အား ပြောပြဖူးပါသည်။ မုတ်သုန်လာသော်လည်း ပျိုးမကြဲမိပါ။ မိုးကတော့ အချိန်တန်လျှင် ရွာမည်သာ ဖြစ်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ကြိုးချင်းထိရန် မနီးကပ်လှပါ။ ဖန်သားပြင်မှ စကားလုံးများမှ တဆင့် နှလုံးသားချင်း ရင်ဖွင့်ဖူးပါသည်။
ထိုကောင်မလေးအား သူက ဒုတိယနှင်းဆီဟု အမည်ပေးကာ တိတ်တိတ်ကလေး ရင်ခုန်ဖူးပါသည်။ သူ၏ ပထမအိပ်မက် အကြောင်းပြောလျှင် နှင်းဆီနားထောင်ပေးသည်။ နှင်းဆီကလဲ သူ့ကို နွေးထွေးစွာ တုံ့ပြန်ပါသည်။ သူ၏ညများ ကြယ်တစ်ချို့ လင်းခဲ့ဖူး၏။ ဒုတိယအိပ်မက်ကို မက်ရင် “ယုတ်မာစွာ” သူကြံစည်ဖူးပါသည်။
Category - life, short story
“ကြယ်ဆိုတာ ကြွေတတ်တယ်...။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာလဲ သေတတ်တယ်...” ကြယ်တွေကို ငေးတတ်တဲ့ ငါ... ကြယ်တွေကိုတောင် မုန်းချင်လာပြီ။ ငါ့ဘဝမှာ.. ကြယ်တွေကြွေတာများပြီ... အတော်လေးတော့ များနေပြီ...။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ရပြီ ရပြီ။ ငါ... မျှော်လင့်ရမှာကို ကြောက်လာပြီ...။
“ငါတို့က အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နေတာ။ နင့်အဖေက '........' ။ နင်က ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရမလား...။ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ရှိသေးတယ်...။ ......................” ရပြီ ရပြီ။ ငါမှားတာပဲ နေမှာပါ...။ maybe ငါက ဒီအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ မထိုက်တန်လို့နေမှာပါ..။ လောကမှာ အဖြူရောင်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလား..။ ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကဖြူပြီး ငါတစ်ယောက်ပဲ မည်းနေတာလား...။ ရပါတယ်လေ..။ ငါပဲမှားပါတယ်..။ အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်ရင်...။ အင်း..။ အချိန် တစ်ခုကို ရောက်လာရင်ပေါ့........။
သူကတော့ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ခေါင်းကုတ်တယ်..။ (လှလည်းမလှဘူး)
၁၅၀၀ + ၁ = zero
တကယ်တော့ သူသည် လည်ဆံမွှေးကောင်းကောင်းနှင့် လှောင်အိမ်ထဲမှ ခြင်္သေ့တစ်ကောင် ဖြစ်သည်။ (အနည်းဆုံးတော့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်)။ သာမန်ကလေးများနှင့် ယှဉ်လျှင် တော်သည်၊ ဥာဏ်ရည်မြင့်သည်၊ ကြိုးစားသည်။ တစ်ချိန်ကသူလိုချင်ခဲ့သော ဆုတစ်ခုအတွက် အိပ်မနေ ကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။ (ယခုပြန်တွေးရင်း ရယ်နေပါသည်)။ သူ့ကိုမွေးသည့် နေ့သည်ပင်လျှင် သာမန်ထက်ထူးခြားသော နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ နှစ်ပေါင်း 20 အတွင်း အအေးလွန်ကဲ ဆုံးနေ့ဟု စံချိန်တင်သောနေ့၏ ညဆယ့်နှစ်နာရီ တိတိတွင် လူ့လောကသို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် သူ့ကိုယ်သူ့ တစ်ခါတစ်ရံ အေးချမ်းခြင်းကို သယ်ဆောင်လာသော ကောင်းကင်တမန်ဟု မရှက်ဘဲပြောတတ်လေသည်။
သူ့ဘဝ၏အစပိုင်းသည် မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ အသိုင်းအဝိုင်း နှင့်ပင် လုံးချာလည်လိုက်ခဲ့သော နေ့များပင်ဖြစ်သည်။ လှောင်အိမ်ထဲမှ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အများက ချီးကျူးကြသည်။ အထင်ကြီးကြသည်။ သူ့မိဘများက ဂုဏ်ယူကြသည်။ ပျော်ကြသည်။ သို့သော် သူမပျော်ခဲ့။ ရုံသွင်းပြခံထားရသော အကောင်တစ်ကောင်လို ခံစားနေရသည်။ သူ ငြီးငွေ့လှပါပြီ။
အိမ်ထဲကို ခေါင်းလေးပြူပြီး ၀င်ရုံရှိသေး မာန်ဖီပြီး အော်လိုက်တဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်ကြောင့် ကျု့ပ်တောင် ရုတ်တရက်တော့ လန့်သွားတယ်။
ကြောင်ကြောက်တဲ့ တစ္ဆေဆိုပြီး နာနာဘာဝလောကမှာ သိက္ခာကျစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ဦးတော့မယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားတင်းပြီး အခန်းထဲကို ၀င်လိုက်ရတယ်။
‘ဟဲ့ ပူစီ၊ ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း’
ကောင်မလေး လှည့်အော်လိုက်မှ သကောင့်သားလဲ ငြိမ်သွားတော့တယ်။ ဒါတောင် ကျုပ်ကို မျက်လုံးကြီး ပြူးပြီး ကြည့်နေလိုက်သေး။
ဟိုနေ့က ကျွန်တော်သီချင်းတစ်ပုဒ် နားထောင်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာသီချင်းပါ။ အင်္ဂလိပ်သီချင်း သံစဉ်ကို မြန်မာစာသားထည့်ပြီး ဆိုထားတာ။ သူငယ်ချင်းက နားထောင်ရင်းပြောတယ်။
ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ အတွေးတွေဝင်လာတယ်။ အနုပညာမှာ ကော်ပီရှိသလား။ သီချင်းတစ်ပုဒ်က အနုပညာပစ္စည်းမှန်ပေမယ့် ကော်ပီသီချင်းတစ်ပုဒ်ကရော။ အနုပညာမြောက်ရဲ့လား။ ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ အဲဒီအကြောင်းကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အချိန်အတော်ကြာ ငြင်းနေကြတယ်။ သူက အနုပညာမှာ ကော်ပီမရှိဘူး။ ကော်ပီပစ္စည်းတွေဟာ အနုပညာမမြောက်ဘူး။ ကျွန်တော်က ကော်ပီလည်း အနုပညာပဲ။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
မင်းငါ့ကို လွမ်းလားမသေချာပေမယ့် ငါ့အလွမ်းတွေကတော့ သေချာပါတယ် ချစ်သူ။ အထူးသဖြင့် မိုးသံ တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ စိုစွတ်တဲ့ညတွေမှာ ငါ့အလွမ်းတွေ ခြောက်သွေ့နေပါတယ် ချစ်သူ။ နင်ပျော်နေပြီလား ချစ်သူ။ ငါကတော့ ငိုနေပါတယ်။ မျက်ရည်မကျတော့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေတယ်ချစ်သူ။ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိပေမယ့် ငါနေတတ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ချစ်သူကိုငါ ထားရစ်ခဲ့တာလား။ ချစ်သူက ငါ့ကို ချန်ခဲ့တာလား။ မသေချာပေမယ့် ငါနင့်ကို အင်မတန်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်ချစ်သူ။ ချစ်သူငါ့ကို ချစ်ခဲ့ရဲ့လား…….။
ငါ့အား ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်ညသန်းခေါင် ဤအမှောင်တိုက်အတွင်းမှနေ၍ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတတ်သော ငါ၏စိတ်ကို ဖန်ဆင်းပေးသည့် နတ်သိကြားတို့အား ငါကျေးဇူးဆိုပါ၏။
လောကဓံတရားတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လက်ဆုပ်တွင်းသို့ ကျရောက်နေသော်လည်း ငါကားမတုန်လှုပ်။ မငိုကြွေး။ ကံတရား၏ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ဒဏ်ချက်တို့ကြောင့် ငါ့ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီ၏။ ဦးကားမညွှတ်။
ဤလောဘဒေါသကြီးစိုးရာ ဌာန၏အခြားမဲ့၌ကား သေခြင်းတရားသည် ကြောက်ဖွက်ရာ ငံ့လင့်လျက်ရှိ၏။ သို့သော်လည်း ငါ့အားမတုန်လှုပ်သည်ကိုသာ တွေ့ရအံ့။
သုဂတိသို့သွားရာ တံခါးဝသည် မည်မျှကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ယမမင်း၏ ခွေးရေပုရပိုက်၌ ငါ့အပြစ်တို့ကို မည်မျှပင်များစွာ မှတ်သားထားသည်ဖြစ်စေ ငါကားဂရုမပြု။ ငါသာလျှင် ငါ့ကံ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်၍ ငါသာလျှင် ငါ့စိတ်ဝိဥာဉ်၏ အကြီးအမှူးဖြစ်လေသည်။
William Ernest Aenley(1849-1903) ၏ Invictus အား ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။
Category - others, ဘာသာပြန်
ဟိုငယ်ငယ်တုန်းက ဘာမှန်းညာမှန်းစသိကတည်းက ခုနှစ်တန်း ရှစ်တန်းလောက် ကစပြီး အသိဥာဏ်ထဲမှာ ရည်မှန်းချက် ဆိုတဲ့ ဟာလေး တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကလဲ လူကြီးတွေက တွေ့တာနဲ့ “ကောင်လေး... ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မှာလဲ” လို့ပဲ မေးကြတယ်လေ။
ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ ပထမဦးဆုံး ဖြစ်လာတဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ဖို့ဗျ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းနာမည်ကြီးချင်တာ။ ပြီးတော့ မင်းသားအလုပ်က လူလဲ သက်သာသေးတယ်။ ရေလဲ အင်မတန်လျှံတာလား။ ကိုယ်သွားတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကို သိနေမယ်။ ကိုယ့်ကို လိုက်ကြည့်မယ်။ ရုပ်စွအဆုံးဗျာ။ လူသေရင်တောင် နာမည်မသေဘူးလေ။ ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ချင်တာက နည်းနည်းပါ။ နာမည်ကြီးချင်တာက ပိုမယ်။
Category - essay, life
ဆယ်တန်းလဲ ဖြေပြီးသွားပြီ..။ အောင်စာရင်းတွေလဲ ထွက်ပြီးသွားပြီ...။ အမှတ်တွေလဲသိပြီးသွားပြီ...။ ကဲ... ရွေးချယ်ရတော့မည်..။ ဘာတက်မှာလဲ...။
ရယ်ရတယ်...။ တွေ့တိုင်းမေးနေကြတယ်..။ “ဘာတက်မှာလဲ”..တဲ့..။ မေးတိုင်းဖြေနေရတယ်..။ မသိဘူးလေ လို့..။ အင်းလေဗျာ..။ ဒီနိုင်ငံမှာ တက်စရာဆိုလို့ ဘာရှိလို့လဲ...။ ဆေးအမှတ်မီရင် ဆရာဝန်လုပ်..။ ပိုက်ဆံလိုချင် သင်္ဘောသီး..အဲလေ.. သင်္ဘောသားလုပ်..။ ကျန်တာတွေ အားလုံး GTC သွား..။ ထန်းရည်သောက်..။ ဖဲရိုက်..။ ဒါပဲရှိကြတယ်..။
ဘာမှပြောစရာမရှိတော့လဲ မင်္ဂလာပါပဲ ပြောကြတာပေါ့။ တကယ်တော့ မင်္ဂလာရှိသွားလား။ မရှိပါဘူး။ (အာညောင်းတာပဲ အဖတ်တင်တယ်) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်လို လိမ္မာချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ မင်္ဂလာပါ ပဲ ပြောရမှာပါ။
အခုမိုးတွင်းရောက်တော့မယ်နော်...။ ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ။ မိုးတွင်းက ရောက်နေပြီ။ နေ့တိုင်းမိုးရွာပြီ။ အခုတော့ ကောင်းပြီဗျို့။ အရင်လို မိုးရွာထဲ ကျောင်းသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ ဆယ်နာရီအထိလဲ အိပ်ချင်အိပ်လို့ရပြီ။ :D ပြောစရာကြီးနော်။ ဒါနဲ့ အောင်စာရင်းတွေလဲ ထွက်တော့မယ်။ ၇ ရက်နေ့ဆိုလားပဲ။ ရင်ခုန်လား? နိုးပါ။ ဘယ်လိုမှမနေဘူး။ ကိုယ်ဖြေတာကိုယ်သိတယ်။ (ကျမှာ) ဟိဟိ။
Blog တွေပြန်မရေးဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီဗျ။ ပြောမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်။ အရင်က Mysuboo မှာရေးတယ်လေ။ ။အခုတော့လဲ...။
အခုတလော ကဗျာတွေ သိပ်ရေးချင်နေတယ်ဗျ။ ကြုံလို့ အရိုးရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ပြဦးမယ်။ အတိအကျတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ အလွတ်မရဘူးဗျ။ မှားသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ အရိုးရေ။
အခုလဲ ကျွန်တော် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်နေတယ်။ ဘာလုပ်ချင်နေလဲတော့ မသိဘူး။ အဲဒါနဲ့ blog ပဲပြန်ရေးတော့မယ်လို့ အခုရေးနေတာပဲ။
ရေးစရာလဲ ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် blogger ဆိုတော့လဲ အဟဲ။ ကြံဖန်လျှောက်ရေးရတာပေါ့။ သည်းခံပြီး ဖတ်ကြပေါ့ဗျာ။ (သိပ်လဲ ဖတ်ကြမယ်မထင်ပါဘူး)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်္ဂလာပါ။ Black Pirate ပါခင်ဗျာ။